(၃၁)ကြိမ်မြောက်သာသနာ့ဝန်ဆောင်သာမဏေကျော် စာတော်ပြန်ပွဲဖြေဆိုနေသည့် သံဃာတော်များ၊ ရှင်သာမဏေများနှင့် သာသနာ့နွယ်ဝင် သီလရှင်များအား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နှင့် ဇနီးဒေါ်ကြူကြူလှ မိသားစုက နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်း၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံ အမတ်ကြီး H.E. Mr. Christian Lechervy အားလက်ခံတွေ့ဆုံ(ရုပ်သံသတင်း) » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဒီဇင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံ အမတ်ကြီး H.E. Mr. Christian Lechervy အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ဧပြီ ၂၀၊ ၂၀၂၀ Admin 0